Cilmi-baadhayaashu waxay ku guulaysteen in ay abuuraan qalab adag sida titanium iyo sida iftiinka sida qoryaha - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Cilmi-baadhayaashu waxay ku guulaysteen in ay abuuraan qalab u xoog badan sida titanyum iyo sida iftiinka sida qoryaha
Science go'aansatay ma laha xadka: koox ka mid ah cilmibaadhe oo ka tirsan jaamacadda Pennsylvania, University of Illinois ee Urbana - Caraabaah iyo Jaamacadda Cambridge waa caddayn maaraynta si loo abuuro qalab loogu talagalay nooca cusub.
Waxyaalaha ku jira su'aasha waxay leedahay qaabka cajiibka ah ee noqonaya mid adag sida titanium ... iyo weliba sida iftiinka sida qoryaha. Waxay kaloo ku dul socon kartaa biyaha. Iyadoo sugeysa in la helo magac cilmi ah, cilmi-baarayaashu waxay si fudud u bixiyaan magaca "qoryaha birta".
Cilmi-baaristaha cilmi-baaristu iyo abuuritaankoodii yaabka ayaa ahaa mawduuc aad u xiiso badan oo ku saabsan warbixinta cilmi-baadhista.
Sidee bay cilmi baadhayaashu u sameeyeen?
Maqaalka warbixinta cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in samaynta qoryaha "metal bir" ah, cilmi-baarayaashu waxay dhigeen qaybo yar oo caag ah oo ka mid ah boqolaal boqolaal nanometer ah oo ballaadhan lagu daboolay biyaha. Ka dibna dareeraha waa la kala bixiyay, siinta habka loo xakameyn lahaa kuwaas oo si fiican u amar qaateen.
Cilmi baarayaashu waxay markaa isticmaalaan dhejisyo si ay u daboolaan dhammaan dusha sare ee nikkel. Kadibna xayawaanka waxaa lagu kala diraa dareeraha, sidaa darteed waxaa jiraya shabakadda nickel oo keliya.
Hawlgalku si fudud ayuu u shaqeynayaa. Dhibaatadu waxay tahay in geedi socodka warshadu uu yahay mid aad u adag oo kaliya ayaa soo saara qadar yar oo qoryo bir ah.
Ugu fiican ee qoryaha iyo birta
Isla mar ahaantaana mid adag iyo ultralight, qoryaha dhuxusha ayaa isku dhafan sida ugu fiican ee qoryaha iyo birta. Laakiin tani maaha wax waliba, sababtoo ah sida cilmi-baare James Pikul uu sharaxayo, tan qalab cusub sidoo kale wuxuu leeyahay qaab dhismeedka qolka alwaax.
"Qalabka Cell waa iska furan. Haddii aad eegto hadhuudh qoryaha waa maxay waxa aad ka arki, qaybo ka mid qaro weyn oo cufan loogu talagalay si ay u ilaaliyaan qaab-dhismeedka, iyo qaybo ka mid iska furan loogu talagalay si ay u taageeraan hawlaha noolaha, sida gaadiidka iyo ka unugyada. "
Awoodda qalabka noocan oo kale ah waa mid aad u ballaaran, hadday tahay soo saarista moobilada ama gawaarida. Cilmi-baadhayaashu waxay awoodeen inay soo saaraan alwaax qoryaha waaweyn ee wakhti go'an, laakiin waxay weli ka shaqeynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen habka wax-soo-saarka si ay u soo saaraan wax badan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.fredzone.org/des-scientifiques-ont-reussi-a-creer-du-bois-metallique-151
SpaceX waxay ku guuleeysatay faaiido cajiib ah intii lagu jiray bilicii labaad ee Falcon Heavy - BGR